Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Duqayn Ku Dishay 4 Qof oo Falastiiniyiin Ah.
Israa’iil oo Duqayn Ku Dishay 4 Qof oo Falastiiniyiin Ah.
Posted by Wariye Qaran	/ July 22, 2018
Ilaa inta la xaqiijiyay afar Falastiiniyiin ah ayaa geeriyootay kadib markii ciidanka Israa’iil jimcihii ay weeraro kala gooni gooni ah ku qaadeen aaga militirigu ka caagan yahay ee ku dhow magaalada Gaza.
Weerarka hore ayaa ka dhacay deegaanada Khan Younis iyo Rafah ee koofurta Gaza, halkaas oo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ee Yuhuudu ay beegsadeen xarumo ciidan oo ay leeyihiin Ezzedine al-Qassam, oo ah garabka hubeysan ee dhaq dhaqaaqa Xamaas, waxaana laga diley sadex kamid ah xubnahooda.
Si kastaba, Guutada al-Qassam ayaa sii deysay magacyada raga laga diley waxayna kala yihiin; Shaaban Abu Khater, 26, Mohamed Abu Farhana, 31, iyo Mahmoud Qeshta, 23 jir ah. Sidoo kale, dhacdo labaad ayaa la soo wariyay in ay ka dhacday goobta loogu magac daray kala wareega banaan baxyada (return marches) halkaas oo lagu toogtay hal nin waxaana lagu dhaawacay 120 kale markii ciidanka Yuhuuda rasaas iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya lagu furey dibad baxyaasha.
Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa ninka la diley magaciis ku sheegtay Mohamed Sherif Badwan, oo 27 jir ahaa, kaas oo ciidanka Israel ay rasaas kaga dhufteen xabadka, bariga magaalada Gaza. Ku dhowaad afar bilood, Falastiiniyiintu waxaa ay magaalada Gaza ka wadaan dibad baxyo dhanka ah Yuhuuda, kuwaas oo u soo dhowaanayay deegaanka ay ciidanku ka caagan yihiin ee dhaca xuduuda labada dhinac.
Tan iyo markii dibad baxyada bilowdeen 30 Maarso ee sanadkan, in ka badan 140 Falastiiniyiin ah ayaa la diley, halka kumanaan kale dhaawacyo soo gaareen. Dibad baxyaasha, ayaa dalbanaya in loo ogolaado in ay ku laabtaan deegaanadooda oo ay dhaxal u leeyihiin laga soo bilaabo 1948 markaas oo si xoog ah looga barakiciyay isla markaana lagu abuurey maamulka Israel.
Sidoo kale, waxaa ay doonayaan in ay cunaqabateynta 11 sano jirsatay laga qaado magaalada Gaza oo ay qiyaastii ku nool yihiin labo milyan, kuwaas oo dhibaato bani’aadanimo ku heysato magaaladaas.